Irina Gorbacheva: ubugcisa kunye nobomi bomntu, isithombe kunye nomyeni wakhe Instagram, umtshato
Unconventional, onobuqili, onobuchule, onetalente kwaye engafani nawuphi na umntu - zonke ezi zinto zizinikele kumdlali weRussia u-Irina Gorbacheva. Ukuqonda kwakhe okubalulekayo kwenyaniso kuye kwavunywa ngabalawuli abaninzi. Ngako oko, umdlali we-actress rhoqo uvela kwiikrini kwiindidi ezahlukileyo. Ngamanye amaxesha kunomsebenzi onzima, oyingqungquthela. Kodwa uhlala ehlangabezana nalo msebenzi. Ngomdlalo obambekayo u-Irina uvame ukutyunjwa kwiibhaso zemikhosi yefilimu ehloniphekileyo. Kungekudala, umdlali waba yinkwenkwezi yangempela ye-Instagram. Amafayili ahlazileyo axabisa amavidiyo ahlekileyo ka-Irina kwaye ngoku kwiphepha lakhe lisayinwe malunga nabantu abayi-1.7.
I-Biography yomdlali we-actress u-Irina Gorbacheva
U-Irina wazalwa ngo-1988 eMariupol. Kodwa emva kwexesha intsapho yathuthela eMoscow.
Umdlali weentlabathini unabantakwabo ababini - umdala uDenis kunye ne-twin u-Igor umzalwana. Le ntombazana yakhula kwintsapho eyayingenakuziqhayisa ngemali ephezulu, kodwa yayinobuhlobo obuhle. Intombazana yayizungezwe uthando lwabazali bakhe nabazalwana bakhe, bathanda ukubenza bahlekise, kwaye wayeyaziwa ngokuba ngumntwana "ohlekisayo". Into eyayihlazisa u-Irina yayikukhula kwayo. Ukususela ebuntwaneni, intombazana yabonisa iitalente zobugcisa. Wayeguquguquke kakhulu kwaye eplastiki, wayethanda ukuhleka utywala kwaye "ufundela indima" yabalinganiswa abahlukeneyo. Ukususela esemncinci, uIra wayesazi ukuba ngubani owayefuna ukuba xa ekhulile-wayefuna ukuba ngumculi. Wenza konke ukuze azalise iphupha lakhe. Ukususela kumabanga okuqala esikolweni le ntombazana yaqala ukuya kwizifundo zemisebenzi kunye nomculo. Wayemhle ekudleni, wayesebenzisa umdlalo kwizinto ezininzi zomculo.
Esithombeni - u-Ira nomzalwana u-Igor
Ubuntwana buka-Ira buya kuthiwa uyonwabile kwaye awunasiphelo, ukuba kungengenxa yesiganeko esibuhlungu kwintsapho yakhe. Xa le ntombazana yayiseglasini elincinane umama wakhe wafa. Ukususela kwiminyaka eyi-14 intombazana encinane yaya emsebenzini. Wayesebenza kwivenkile, kwiimarike, kwaye wayesebenza ngexeshana kwisityalo. Kodwa uhlobo lokudala kunye nomnqweno wokufumana umsebenzi we-actor akazange amvumele aphelelwe yintliziyo. Ukongezelela emsebenzini, wakwazi ukuya kwi-studio yecaterari.
Emva kokugqweswa u-Irina wasebenza njengomgcini we-waitress. Umhlobo wam umama wacebisa u-Irina ukuba angene esikolweni esiphakamileyo sezemidlalo aze afeze iphupha lakhe lokuba ngumdlali weqonga. Inkwenkwezi yekamva yezikrini ezithunyelwe ngamaxwebhu kwiSikolo soBuchule esibizwa ngokuba yiBsSchukin. Kufunyenwe ngethuba lokuqala kwiRodion Ovchinnikov.
Uhambo luka-Irina Gorbacheva
Njengomfundi, u-Irina wakwazi ukuzibonakalisa kakuhle. Wayebonakalisa ngokupheleleyo italente yakhe yomdlali. I-Gorbachev ithatha iindima ezinzima kakhulu kwimveliso.
Kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani imisebenzi yomlawuli, umdlali-mdlali wayehlala ekwazi ukuhlangabezana nazo. Yintoni umfanekiso wentsholongwane engenazo i-Orleans enkundleni "uJeanne d'Arc". Kwinqanaba lemidlalo yezemidlalo u-Irina uye wadlala indima emininzi kwaye inzima, efuna inxaxheba enkulu yeetalente nokuzinikela okumangalisayo. Kwiminyaka yakhe yomfundi uthathe inxaxheba kwimveliso enjengale:
"Indoda yafika kumfazi"
"Ukwesaba nosizi kulawulo lwesithathu"
Ngo-2010 u-Irina Gorbacheva waphumelela kwisikolo seShchukin. Umgqweswa wabufumana ngokukhawuleza umsebenzi we-theater "I-Workshop kaPeter Fomenko." Ekuqaleni wayeyingxenye yeqela labafundi, kwaye ngo-2013 waba yinxalenye yezidumbu ze-theater. Kwaye nantsi impawu zobuntu obubalaseleyo be-actress zityhilwa. Abaninzi bemidlalo bayayikhumbula imisebenzi yakhe ecacileyo kwimidlalo yaseMoscow iPyotr Fomenko:
Ibhinqa elidala laseGypsy e "Dowry"
Gasha kwiiNdibano zokugqibela
U-Elena ekwenzeni "Iphupha lokuhlwa kweMidsummer Night"
Umqhubi kumdlalo othi "i-Redhead"
Ukongeza, wathatha inxaxheba kwimveliso ye studio ye-O. Tabakov. Njengomculi weendwendwe, wayebandakanyeka kumdlalo "UFaryatyev's Fantasies".
U-Irina naye wadlala kwezinye iithala ze-capital. Itheyetha yaseMoscow yaxabisa iimboniso kunye nokuthatha inxaxheba komdlali omncinane kunye neetalente. Ingakumbi abaphulaphuli bakhumbula uMary Macbeth kumdlalo we-AR A.T.O. Umdlali we-actress wasebenza kwi-theater. Vakhtangov. Apho apho wadlala omnye wabafundi bendlu yokubhola edlala "Mademoiselle Nitouche."
Irina Gorbacheva kwi-cinema
Ngowokuqala kumabonwakude, u-Irina wabonakala ngo-2008. Wadlala indima encinane kwiifilimu "Indigo" kunye "noMthetho kunye nomyalelo: injongo yobugebengu - 3". Ngo-2010, wayenenkwenkwezi kwi-movie "Inkokhelo." Umfanekiso wentombikazi kaLena yayithande ababukeli kunye nabahlaziyi befilimu kangangokuthi wathola umklomelo ekutyunjweni kwe "Best Actress" kwiTransbaikal Film Festival. Ingqikithi, irekhodi lomculo we-actress li malunga nama-20 amafilimu. Kwaye indima ihluke ngokupheleleyo. Umdlali we-actress unesipho esiyingqayizivele sokuphinda abuyele kubalinganiswa beentlobo ezahlukeneyo.
U-Irina Gorbacheva kwifilimu "Inkungu-2"
Ifilimu "Imbuyekezo". Irina Gorbachev njengoLena
Ividiyo yebhanki ka-Irina Gorbacheva - ividiyo ehlekisayo yomdlali we-Instagram
Ngaphandle kokulindela, umdlali we-actress waba "i-video blogger" eyaziwayo. Iividiyo zakhe ezimnandi, ukugculela ububudenge, ukunyaniseka, ukunyaniseka, ukuzingca kunye nezinye izinto ezimbi, ziye zanqoba iintliziyo ezininzi. Bayalindela ngokulangazela umdlali weqonga ukuba abelane ngokutsha kwevidiyo edlalwa ngokutsha yomsindo womsindo. Kwaye konke kwaqala ngo-2015, xa umdlali we-actress wakhicilela iividiyo ezininzi ezimnandi kwiphepha lakhe kwi-Instagram. Bekungasetyenziselwa ukubukela ngokubanzi. U-Irina wabelane ngamavidiyo akhe amnandi kunye nabahlobo, inani elincinci lababhalisi.
Umkhosi wezigidi wabalandeli wabonakala kwi-actress, xa omnye wabathengisi abadumileyo beTV abelana nabakhonkethi bakhe kwikhadi levidiyo ukusuka ku-Irina Gorbacheva. Roller kakhulu wayethanda abalandeli ukuba ukuthandwa ngu-Irina Gorbacheva kwiintanethi zentlalo zaqala ukukhula ngokukhawuleza. Namhlanje, inani lababhalisi kwi-Instagram lifikelela ngokukhawuleza kwezigidi ezi-2. Abaselula, abadala kunye nabantwana - bonke bavuyiswa ngumdlalo we-video omhle kwaye ochanekileyo we-actress. Ukucaphuna kwakhe, faka iividiyo zakhe kumaphepha kwiinkonzo zentlalo kwaye ushiye amazwana amanqaku amahle malunga nobuchule obuncinane bokusondeza kwesithixo.
Ukukhethwa kwemidlalo yevidiyo ngu-Irina Gorbacheva
Emva kokubukela le vidiyo, uza kubona indlela ephathekayo ngayo i-talented comic talent. Amavidiyo omhle ka-Irina avela njani kwi-Instagram kwaye kutheni ayenze umdlali owaziwayo ngokubanzi-kule vidiyo, umdlali ngokwakhe uya kuthetha ngempumelelo yakhe kwiblogi.
U-Irina Gorbacheva - ubomi bomntu bomdlali
Ngo-2015, u-Irina watshata. Umyeni wakhe wayengumdlali weGrigory Kalinin, owaziwayo kubaphulaphuli ngokubonga indima yakhe kwifilimu ethi "Isiqithi". Umdlali we-actress wabona umyeni wakhe okokuqala, ebukela i-movie "Inkungu". Ekuqaleni uGrigory wayebonakala kumdlali weqhawe kwaye uyazikhukhumeza kunye ne-narcissistic. Kodwa nangona kunjalo, umdlali we-actress uyavuma, waqonda ukuba wayemthanda lo mfana.
Esithombeni - umyeni ka-Irina Gorbacheva
Ekuqaleni wabona umkhethiweyo wakhe kwi-set of one series. Apho badibana kunye kwaye abaqhelana nabo bakhula baba nobuhlobo obude kunye nomtshato. Abantwana abanalo isibini kodwa, kodwa u-Irina ngokwakhe ucwangcisa intsapho enkulu, apho abantwana abancinci abane baya kukhula.
Irina Gorbacheva kunye nomyeni wakhe
UGrigory Kalinin kunye no-Irina Gorbachev - umtshato ongaqhelekanga wemibini yokuqala
Ukuqala komdlali we-actress kwabonakala nakwixesha lomtshato. U-Irina akazange abonakale emhlophe yomtshato kunye "nengubo yomtshato". Umdlali we-actress wakhetha umtya omnyama omkhosi. Esi sigqibo esingaqhelekanga siye sabetha abantu abaninzi. Emtshatweni, akusiyo isiko ukugqoka iingubo ezimnyama nakwiindwendwe, kodwa apha umtshakazi ngokwakhe waphule ikhowudi yokugqoka.
Umtshakazi u-Irina Gorbacheva, umtshato
Xa ebuzwa malunga nale ngubo engavamile, u-Irina uphendula ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kokuhlazeka: "Ndimthanda nje ingubo". Kwaye uyongezelela ukuba akayithandi i-pathos exhasayo kwimisitho yomtshato. Umcimbi omkhulu kunye neholide ubheka umtshato ebandleni, apho umbala omhlophe ufanelekileyo ngakumbi. Kwaye imali enkulu ke ayikwazanga ukuziqhayisa ngemali enkulu. Ngenxa yoko, abantu abaselula bahamba ngendlela encinci - i-Ira wathenga ingubo ayithandayo kakhulu kwigumbi lokubonisa. Yaye indoda yakhe yathenga i-suit in Topshop.
U-Irina Gorbacheva kunye nomyeni wakhe, ifoto yomtshato
U-Irina Gorbacheva kunye nomyeni wakhe: isithombe esivela ku-Instagram
I-Instress yomdlali we-actress igcwele imizobo yokudala. Kulapho uza kubona ezininzi ezahlukeneyo imifanekiso:
Umdlali we-actress ngexesha elithetha ngaphandle kokuma egumbini lokugqoka
Umama, ufundisa umntwana wakhe rhoqo
Umntu ongaphandle kwelinye ilizwe ngokugxininisa ukuba izinto zaseRussia azidini
Intombazana enomsindo, inomsindo ebomini kunye nabanye
Amantombazana amashishini, amantombazana omzimba kunye nezinye izinto ezenziwa ngumfazi omncinci kunye noxakekayo
Tiger Lyova kunye ne-Bear Misha
Ukongeza kwividiyo ezihlekisayo kwiphepha le-actress kwi-Instagram ngezikhathi ezithile, kukho iifoto ezidibeneyo kunye nomyeni wakhe. Sikumema ukuba ubone iifoto zeentsapho ezintle kakhulu zika-Irina Gorbacheva. Zibonisa ukuba zihambelana njani ubudlelwane besibini esibalulekileyo.
IsiBasque - umthengi oqhelekileyo wezilwanyana zeplastiki, iifoto ngaphambi nangemva kweeplastiki
Indlela yokuzimelela ngokwezimali
I-eyelashes emide neyinde
Ukulungiselela unyango lwezifo zesikhumba
Indlela yokucima iibhegi phantsi kwamehlo?
Iingoma zamandulo kunye nezanamhlanje ekugqibeleni kwizifundo ze-4, 9, 11 zeetekisi (iitekisi, amanqaku)
Ulwakhiwo lwemfundo ephakamileyo eNgilani
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-21
Ubudlelwane kwintsapho kunye nempembelelo yabo ekukhuliseni
Impazamo ebuhlotsheni phakathi kwendoda nomfazi
Kutheni umntu ecaphukisa umfazi
Imithombo yeendaba zangaphandle ifunyenwe imfihlo eyintloko kaVladimir Putin
Ukunyamekelwa kweenwele ezintle kakhulu
Ukuziphatha kwendoda uAgasari kunye namantombazana
UJulia Vysotskaya ukhathazeka ngenxa yobundlobongela
Iifoto ezingcolileyo zikaNatalia Sturm kwiindleko zika-Anna Kalashnikova ngeHalloween zithukuthele umnxeba